Foomamka Excel ee Nadiifinta Xogta Guud | Martech Zone
Muddo sanado ah, waxaan u isticmaalay daabacaadda inay tahay ilo aan kaliya ku sharixi karin sida wax loo sameeyo, laakiin sidoo kale inaan u haayo diiwaan naftayda si aan gadaal u eego! Maanta, waxaan haysannay macmiil nagu wareejiyay feyl xogta macmiilka oo musiibo ahayd. Dhab ahaantii goob kasta waxaa lagu khalday oo; taasoo keentay, inaan awoodi kari weyno inaan soo dejino xogta. In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo dheeri ah oo loogu talagalay Excel si loo nadiifiyo iyadoo la adeegsanayo Visual Basic, waxaan u wadnaa Office for Mac oo aan taageeri doonin macros. Taabadalkeed, waxaan raadineynaa qaaciidooyin toosan oo caawiya. Waxaan u maleynayay inaan la wadaagi doono qaar ka mid ah kuwa halkan jooga si kuwa kale ay u isticmaalaan.
Ka saar Astaamaha Aan Tirada ahayn
Nidaamyadu waxay badanaa u baahan yihiin lambarrada taleefannada in lagu daro qaaciddo qaas ah, oo ka kooban 11 lambar oo leh lambarka waddanka oo aan lahayn calaamado. Si kastaba ha noqotee, dadka waaweyni waxay badanaa ku galaan xogtan iyaga oo wata jajabyo iyo xilliyo halkii. Waa tan qaacido fiican oo loogu talagalay ka saarida dhamaan jilayaasha aan tirada aheyn ku jira Excel. Qaaciddada ayaa dib u eegaysa xogta ku jirta unugga A2:
Hadda waad nuqulan kartaa khaanadda ka dhalatay oo isticmaal Tafatir> Ku dheji Qiimaha in lagu qoro xogta iyadoo la adeegsanayo natiijada si habboon loo qaabeeyey.
Ku qiimee aagag fara badan OR
Waxaan badanaaba ka nadiifinaa diiwaanada aan dhameystirneyn soo dejinta. Isticmaalayaashu ma ogaanayaan inaadan had iyo jeer u baahnayn inaad qorto qaaciidooyin kala duwan oo kala sarreysa oo aad taas qori kartid qoraal AMA beddelkeeda. Tusaalahan hoose, waxaan rabaa inaan hubiyo A2, B2, C2, D2, ama E2 wixii xog ah ee maqan. Haddii wax xog ah la waayo, waxaan dib u soo celinayaa 0, haddii kale 1. Taasi waxay ii oggolaaneysaa inaan kala sooco dalabka xogta oo aan tirtiro diiwaannada aan dhammaystirnayn.
Goobaha Isku-dhafan iyo Isku-dhafan
Haddii xogtaadu leedahay aagag Magaca Hore iyo Magaca Dambe, laakiin soo dejintaadu leedahay goob magac oo buuxa, waad isku duubnaan kartaa beeraha si hagaagsan adoo adeegsanaya dhismaha Excel Function Concatenate, laakiin hubi inaad isticmaasho TRIM si aad uga saarto meelaha bannaan ee ka hor ama ka dib qoraalka. Waxaan ku duuduubeynaa berrinka oo dhan 'TRIM' haddii ay dhacdo in mid ka mid ah beeraha uusan laheyn xog:
Hubi cinwaanka E-maylka ansax ah
Qaacido fudud oo quruxsan oo labada iyo @ iyo labadaba raadineysa. cinwaanka emaylka:
Ka saar Magacyada hore iyo kan dambe
Mararka qaarkood, dhibaatadu waa cakis. Xogtaadu waxay leedahay goob magac oo buuxa laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka baaraandegto magacyada hore iyo kan dambe. Qaacidooyinkaan waxay raadinayaan inta udhaxeysa magaca hore iyo kan dambe waxayna qabsadaan qoraalka meeshii lagama maarmaan ah. IT sidoo kale wax ayey qabataa haddii uusan jirin magaca dambe ama uu jiro meel bannaan oo laga soo galo A2.
Iyo magaca dambe:
Xaddid Tirada Calaamadaha oo Ku dar…
Weligaa ma rabtay inaad nadiifiso sharaxaadaada meta? Haddii aad dooneysay inaad ku soo jiido nuxurka 'Excel' ka dibna jar waxyaabaha loo adeegsado aagga Sharaxaadda Meta (150 illaa 160 xaraf), waad sameyn kartaa taas adoo adeegsanaya qaacidadan Meeshayda. Waxay si nadiif ah u jabisaa sharraxaadda meel bannaan ka dibna waxay ku dareysaa…:
Dabcan, kuwani looma jeedin inay noqdaan wax dhameystiran… kaliya qaaciidooyin dhaqso ah oo kaa caawinaya inaad bilowdid boodbood! Qaaciddo noocee ah ayaad isku aragtaa adiga oo isticmaalaya? Ku dar iyaga faallooyinka waxaanan ku siin doonaa sumcad markii aan cusbooneysiiyo maqaalkan.
Tags: hubi cinwaanka emaylku heer saretafatir qiyamka dhejiskasareheer sare iyocinwaanka emailka jeeg sarewada shaqeyn wanaagsanhelitaan fiicanformula wanaagsanqaaciidooyinka sarebidix fiicanmidig sareraadinta heer sarekala qeybsanaanqaab lambarka taleefankaformulaMicrosoft ExcelMicrosoft Officeaan tiro lahaynqiimaha dheji